सितापुरको घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेस बांकेको बैठकमा हंगामाः संगठन बिभाग प्रमुखको राजीनामा, घटनाको वास्तबिक रिपोर्टको भिडियो सहित – HamroSamrachana
सितापुरको घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेस बांकेको बैठकमा हंगामाः संगठन बिभाग प्रमुखको राजीनामा, घटनाको वास्तबिक रिपोर्टको भिडियो सहित
हाम्रो संरचना । ३० भाद्र २०७६, सोमबार १४:०९
२६ भदौ, नेपालगञ्ज/ बांकेको सितापुरमा भएको घटना लगायतका बिषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस बांकेले आईतबार आयोजना गरेको बैठकमा ब्यापक हंगामाका बीच पार्टीका जिल्ला संगठन बिभाग प्रमुख तथा घटनामा प्रत्यक्ष सहभागी रहनुभएका महेन्द्र मल्लले राजीनामा दिनुभएको छ ।
राजीनामा पत्रमा ब्यक्तीगत घरायसी कारणले भनेर उल्लेख गरे पनी बैठकमा अधिकांस बोल्ने बक्ताले घटनालाई अनावश्य ब्यक्ती मुछने काम भएकाले झुटो बोलेर त्यस्तो गर्न नहुने बास्तबिक दोषीलाई कार्बाही गर्नुपर्ने बताएपछी बैठकमा एक आपसमा बिरोध स्वरुप हंगामा भएको थियो ।
हंगामा कै बीच घटनालाई लिएर जिल्लाका नेतृत्व बर्गमा एक आपसमा चर्काचर्की बहस भएपछी संगठन बिभाग प्रमुख महेन्द्र मल्लले आफुले झुटो बोल्न नसक्ने बताउदै राजीनामा दिनुभएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार पार्टीका संगठन बिभाग प्रमुख महेन्द्र मल्लले राजीनामा पछी आफुले सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्ने मोबाइल स्वीच अफ गरेको कारण मल्लसंग हाम्रोसंरचनाको सम्पर्क हुन सकेको छैन ।
बैठकमा उक्त घटनाको भिडियो समेत बाहिर आईसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस बांकेको पार्टी सभापती किरण कोइरालाले मलाई त्यो मान्छेले हानेको हो भनेर भिडियो देखाएको र उक्त ब्यक्ती नेपाली कांग्रेसकै कार्यक्रममा सहभागी कार्यकर्ता भएपछी मल्लले उक्त घटनामा बास्तबिक जे भएको त्यही गरौं अहिल्यको जमानामा झुट धेरै दिन सम्म टिक्न नसक्ने र आफुले नबोल्ने बताउदै राजीनामा दिनुभएको स्रोतले बताएको छ ।
उक्त घटना पछी एक पक्षले सभापतीको आक्रमणकारीले हात भांचेको घटना देशब्यापी भएकाले उक्त मान्यतालाई स्थापित गदै आन्दोलनलाई उचाईमा पु–याउनुपर्ने बैठकमा सहभागीहरुले आफनो बिचार राखेका थिए ।
सितापुर घटनाको वास्तबिकता:
गत भदौ २६ गते आईतबार नेपाली कांग्रेसले केन्द्रिय कार्यक्रम अन्र्तगत केन्द्रीय प्रतिनिधि विद्या खनालको प्रमुख अतिथि तथा बांके सभापती किरण कोइरालाको सभापतित्वमा कांग्रेस जागरण अभियान अन्र्तगत बांकेको सितापुर वडा नम्बर २मा रहेको रेडक्रसको भवनमा कार्यक्रमको आयेजना गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा सभापति कोईरालाले आफनो बिचार राखीसकेपछी प्रमुख अतिथि विद्या खनालले बोल्दाबोल्दै केही युवाहरु कार्यक्रम स्थलमा बसिरहेको अवस्थामा कार्यक्रम स्थलमा नै बक्ताले बोलीरहेको अवस्थामा स्थानिय असलम भाटलाई “तपाईसंग काम छ एकछिन बाहिर जाम” भनेर भन्छन ।
असलम भाटले कार्यक्रमको फेसबुक मार्फत भिडियो लाइभ गरिरहेका हुन्छन् । एकछिनमै हो-हल्ला बाहिर जाउ भन्ने र नजाने भन्नेबीच बिवाद हुदैजान्छ र विवादका बीच कार्यक्रा बिथोेलिन्छ ।
उक्त घटनामा नाम जोडिएका असलम भाट विरुद्ध सितापुर कै राधापुर चौकीमा एक घटनाको उजुरी परेकोले नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रम भएकै दिन विहान ९ बजेदेखि छलफल राखिएको र असलमले पनि आउँछु भनेर नआएपछी स्थानिय एक जना युवाले अस्लमलाई तिमीसंग कुरा गर्नछ एक छिन बाहिर जाउ भनेपछी घटना बिवादको रुपमा परिणत भएको उक्त घटनाको भिडियो क्लिपमा रहेकोछ ।
अस्लम भाट ४ घण्टा सम्म चौकिमा नआउँदा हामी उसलाई लिन आएका हुँ भन्दै गर्दा हल्ला बढ्दै जान्छ । एकछिन हो–हल्ला भएर एक पक्ष कार्यक्रम स्थल बाहिर निस्किन्छन ।
आक्रमण तथा एकले अर्कोलाई हात हाल्ने काम कतैबाट पनि भएको छैन । एक्कासी नेपाली काँग्रेस बाँके सभापति किरण कोइरालालाई हातमा हिर्काएको भन्ने आवाज त्यहाँ सुनिन्छ ।
सभापती कोईरालाले उक्त ठाउंमा कार्यक्रम गर्न बाहिरबाट गएकाले भिडभांडमा आफनै सहभागी कार्यकर्तालाई देखांदै उ त्यो ब्यक्तीले हानेको भन्ने गरेको भिडियोमा देखिन्छ ।
कोईरालाको उक्त अवाजपछी असलम भाटले पनि अझै चर्को स्वरमा सभापतिमाथि हातपात भयो भनेर जोडले कराउँदै भिडियो बनाएको उक्त भिडियोमा देखिन्छ ।
वास्तवमा त्यहाँ कोहीले कसैलाई एक झापड सम्म पनि हानेको छैन । स्वयम् नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता असलम भाटले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा पनि आक्रमण भएको कही कतै देखिदैन । बरु देखिन्छ त किरण कोइरालाले मलाई यसरी हिर्काए भनेर जोडले आफ्नो दाइने हातले देब्रे हातमा हानेको देखिन्छ ।त्यहाँ कुनै आक्रमण भएको छैन भन्ने कुराको पुष्टि त्यो भिडियोले नै गरेको छ ।
सोही घटनालाई ठूलो रुप दिँदै नेपाली काँग्रेस, बाँकेले किरण कोइरालाको हात भाँचियो, दर्जनौ कार्यकर्ता घाइते, सांघातिक आक्रमण भयो, नेकपाका कार्यकर्ता जो सरकारबाटै संचालित छन् । यो पार्टीमाथिको आक्रमण हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालगञ्जमा सार्वजनिक गर्छ र यो घटना देश व्यापी भएको छ ।
कुनै पनि बहानामा अरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रवेश गरेर हो होल्ला गर्न पाइदैन । मुद्दा त्यति मात्र काफी थियो राजनीतिकरण गराउनलाई तर, यसमा भएको नभएको झुठा कुरा र भ्रामक कुरा गरेर जनतामा भ्रम छर्नु उचित हो होइन यसको वास्तविकतामा गएर गर्नेहरुले नै सोच्नु पर्छ ।
सांघातिक आक्रमण भएको १२/ १३ जना घाइते भने पछि त्यसको पुष्टि पनि त गर्नु पर्ने हो को को घाइते भए ? चोट लागेको कहाँ छ ।फेरी प्रहरी स्वयम घटनास्थलमा छ । कुनै पनि बाहानामा त्यहाँ घुस्न नहुने हो । उनीहरु घुसे गल्ती सोझै छ । यसमा कसैको दुई मत छैन । तर, जसरी नभएको आक्रमणलाई आक्रमण त्यो पनि सांघातिक भनेर अनर्गल प्रचार गरियो घटनालाई ठूलोरुप दिइएको छ यसले अगाडिका दिनमा कस्तो वातावरण बन्ला ?
जो कोही पनि वास्तविकता र सत्यमा जानु पर्छ । रह्यो सभापति किरण कोइरालाको हात भाँचिएको कुरा प्रहरीले नेपालगञ्जसम्म ल्याएर छोडेको छ । त्यतिञ्जेल ठीक थियो भनिएको छ । यो कुरा स्वयम् जिल्ला स्तरिय नेता देखि कार्यकर्ता पनि सगै हुनुहुन्छ सब ठीक छ भनेपछि प्रहरी पनि ढुक्क भएर फर्किएको अवस्था थियो ।
पहिल्यै देखि हल्का हात दुखिरहेको महसुस गरिरहनु भएको सभापतिले एकै छिन्मा हातमा प्लाष्टर गरेर आएर बांके कांग्रेस सभापती किरण कोईरालाले पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले चारैतिरबाट घेरेर १५/१६ जनाको जत्थाले आक्रमण गरेर हात भांचेको बताएपछी घटनाको सोरुप बदलिएको हो ।
एकै छिन अगाडि नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु पार्टी कार्यालय जो पुगेका थिए उनीहरुले घटनाको वास्तविकता बारे कुरा गरिरहेका थिए । यो वास्तवमा पार्टीगत कुनै कुरा होइन बसेर समाधान गर्नुपर्छ । भनिरहेको अवस्थामा एक्कासि एकछिन पछि सबै तँई चुप, मै चुप भएको अवस्था भयो । त्यसको एउटै कारण हो, किरण कोईरालाको हातमा प्लस्टर ।
भनाई यति मात्र हो कि भोली यसलाई ठूलो रुपमा बताउनु थियो भने सभापति किरण कोइरालाको मेडिकल चेकअप हुनुपथ्र्यो र सांच्चीकै हात भांचिएको भए अरु घाइते भनिएकाहरुको सहित पनि हुनु पर्ने प्रहरीको निगरानीमा मेडिकल रिपोर्ट सहितको उपचार हुनुपथ्यो । त्यो किन गरिएन ? किन भने अलि कति पनि कसैलाई कोतरिएको समेत उक्त घटनामा देखिदैन । तर, काँग्रेस भन्छ सांघातिक आक्रमण भयो । यो घटनाक्रम भयो ।
मेडिकल रिपोर्टमा के लेखेको छ ? त्यो किरण कोईरालाको श्रीमान श्रीमान स्वर्गिय डाक्टर अरुण कोईराला एक असल ब्यक्तीत्व भएकोले डाक्टर अरुणको साथी पनि भएकाले डाक्टर बिनोद थापा मार्फत भेरी अञ्चल अस्पतालबाट मेडिकल रिपोर्ट बन्ने छ ।
त्यो रिपोर्ट बनाएपछी जानकारी हुने नै छ । तर पहिल्य हात भांचिएकोले बेन्डेज खोले खेखि नै भांचिएको हात धेरै नचलाउन भनिएकोमा चलाएकै कारण नाडी निर हल्का डिस लोकेड भएकोले हल्का इक्सरसाईज र बेन्डेजको प्रयोग गर्न चिकित्सकले सल्लाह दिएको बताईएको छ । तर उक्त घटनामा भांचिएको भनिएको हातको रिपोर्ट भने हाल गोप्य नै रहेको छ ।
भदौ २६ गते साढे चार बजेको समयमा पत्रकार सम्मेलन पार्टी कार्यालयमा भयो । संचार माध्यममा नेकपाका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट बाँके सभापति किरण कोइरालाको हात भाँचियो । स्थानीय, राष्ट्रिय मिडिया मात्र होइन सामाजिक संजालमा पनि व्याप्त गरियो । त्यपछि ठूलो रुप अझै हुँदै जान्छ ।
भोलीपल्ट विहान नेकपा बाँकेका अध्यक्ष आइपी खरेल र अशोक कोइरालाले आफ्नै ढंगबाट सभापति कोइरालालाई भेटेर पार्टीको कुनै नीति नियत होइन गलत भएकोमा सच्याउने र एक आपसमा बसेर सहमती गर्ने घटनालाई मिलाउने सहमती गरेको सभापती कोईरालाले समेत सार्वजनिक रुपमा मिडिया समक्ष बताउनु भएको थियो ।
नेकपा बांकेले पनि एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर दुईपार्टी वीचको सहकार्य अझै आवश्यक छ सहकार्यमै अगाडि जानुपर्छ । सभामा प्रवेश गरेको कुरा गलत हो भनेका छन् ।प्रहरीले सभामा प्रवेश गरेको र होहल्ला मच्चाउने तीन जनालाई आवश्यक कारवाहीका लागि पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान गर्दैछ । काँग्रेस केही कुरालाई मान्दैन र भए नभएका मान्छेका नाममा मुद्दा दर्ता गराउन खोज्दैछ ।
यो मुद्दालाई देश व्यापी गराउने, संसद चल्न नदिने जस्तो काम गरिरहेको छ । आन्दोलन गरिरहेको छ केन्द्रसम्म । वास्तविकतामा जान्न र थाह पाउन जरुरी छ।भुवनसिंह थापा जो काँग्रेसकै कार्यकर्ता हुन खजुरा गाउँपालिका वडानम्बर १ का र अर्का काँग्रेस कार्यकर्ता असलम भाट जो वडा नं. ७ का बासिन्दा हुन ।
उनीहरु २ जनाको लडाईमा मिसिएका र केही नेकपाका कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउने कुरा गरिरहँदा घटनाको वास्तविकतामा थाह पाउन जरुरी छ । प्रहरीको भूमिकालाई दोष दिएको देखिन्छ । प्रहरीलाई कार्यक्रमबारे औपचारिक रुपमा सुरक्षा माग गरिएको थिएन । तर, जब होहल्ला भयो । ठूलो घटना हुन सक्छ भनेर खजुराबाट त्यहाँ पुगेको प्रहरीले थप फोर्स मागेको छ भने जिल्लामा काँग्रेसका नेताले आफै फोन गरेर सुरक्षा दिन भनेका छन् । तत्काल प्रहरी पुगेको देखिन्छ ।
घटनाको वास्तबिक रिपोर्टको भिडियो सहित
घटनाको भिडियो क्लिपस जुन असलम भाटको फेसबुक पेजबाट र अन्य समाचार स्रोतबाट लिईएको हो ।